GO'AAN: Real Madrid Oo Go'aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Eden Hazard - GOOL24.NET
GO’AAN: Real Madrid Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Eden Hazard
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa go’aan ka gaadhay mustaqbalka xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard oo xilli ciyaareedkiisii saddexaad ku dhibaatoonaya Santiago Bernabeu.
Eden Hazard oo sannadkii 2019 ay Real Madrid kasoo iibsatay Chelsea ayay soo gaadheen dhaawacyo culus oo uu muddooyin badan garoomada kaga maqnaa, waxaase uu hadda dib ugu soo laabtay tababarka isaga oo rajaynaya inuu qayb ka noqdo kulanka Axadda ee Cadiz.
Garabka midig ee weerarka ee uu ka ciyaaro Eden Hazard ayaa waxa ka xoogsaday Vinicius Junior oo aanay cidina kula tartami karayn, sidoo kalena khadka dhexe ayay ka haystaan Luka Modric iyo Toni Kroos, taas oo ka dhigan in labadii boos ee uu ka ciyaari jiray aanu midkoodna helayn.
Xiddigan ayaa hore loo sheegay in lagu darayo liiska ciyaartoyda ay Real Madrid iibin doonto xagaaga, maadaama ay Los Blancos filayso inay si bilaash ah kula soo wareegto Kylian Mbappe oo haddii uu yimaaddo sii dili doona fursaddii uu Eden Hazard ka heli lahaa Santiago Bernabeu.
Dhinaca midig ee weerarka oo ah booska uu rajada ka qabo Hazard ayaa sidoo kale ay joogaan Rodrygo Goes iyo Fede Valverde oo bandhig heersare ah samaynaya, isla markaana xilli ciyaareedkan ahaa sirta kooxda ka caawisay inay timaaddo finalka Champions League.
Carlo Ancelotti oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa shaaciyey go’aanka Real Madrid ay ka qaadatay Eden Hazard iyo waxa ay ka damacsan tahay xilli ciyaareedka dambe, waxaana uu sidoo kale ballan-qaaday inuu ciyaarsiin doono kulanka Cadiz ee habeen dambe kaddib markii uu laacibkani kasoo kabtay qalliin fudud oo lagaga sameeyey kuraanta oo ay kaga jireen biro lagu kabay laba sannadood ka hor.
“Qorshaha Eden Hazard wuu cadyahay. Halkan ayuu joogaa, waanu dhiirran yahay sababtoo ah waqtiyo adag ayaa soo maray sannadihii u dambeeyey. Waxa uu doonayaa inuu soo bandhigo tayadiisa.” Ayuu yidhi Carlo Ancelotti.